LAYAAB: Zidane oo qarka u saaran inuu ku laabto Real Madrid, si uu u noqdo badalka Solari – Gool FM
Barcelona oo saddex kulan u qabatay shaqada Ronald Koeman
Paris Saint-Germain oo iibka Kylian Mbappe ku xirtay xiddig u ciyaara Real Madrid iyo heshiis is dhaafsi ah
Chelsea oo sababo suuqa la xiriira u iibineysa Rudiger & Labo naadi oo durba xiiso u muujinaya difaaca Jarmalka
Manchester United oo wada-xaajood heshiis kordhin ah kula jirta labo ka mid ah xiddigaheeda… (Bruno iyo…)
LAYAAB: Zidane oo qarka u saaran inuu ku laabto Real Madrid, si uu u noqdo badalka Solari
Dajiye March 11, 2019
(Real Madrid) 11 March 2019. Real Madrid ayaa isku diyaarineysa inay ku dhawaaqdo saacado yar kadib, dib u soo laabashada Zinedine Zidane, si uu u leeliyo kooxda, kadib marka shaqada laga ceyriyo Santiago Solari.
Wargeyska “L’Equipe” ee dalka France ayaa si deg deg ah ugu daabacay website-kooda waxay ku sheegeen:
“Zidane ayaa ku laabanaya Real Madrid si uu u noqdo badalka Solari”.
Warka ayaa waxaa intaas lagu sii daray:
“Layaabka ugu weyn, Zidane ayaa ku laaban doono shaqada tababarka ee kooxda Real Madrid, wuxuuna bilaabi doonaa shaqadiisa laga bilaabo bari oo Talaado ah”.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in maamulka kooxda Real Madrid ay go’aansadeen in ay shaqada ka ceyriyaan Santiago Solari manta oo isniin ah, kadib kulan deg-deg ah oo dhexmaray madaxda kooxda.
Madaxweyhana kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa lagu soo waramayaa in saacado kahor uu la xiriiray Zidane, balse macalinkii hore Los Blancos ayaa codsaday inuu sugo wax yar, ka hor inta uusan ku dhawaaqin ogolaanshihiisa.
RASMI: Jordi Alba oo heshiis cusub u saxiixay kooxda Barcelona
Santiago Solari oo macsalaameeyay ciyaartoyda kooxda Real Madrid